China abakhiqizi be-3D embossed UV Resistance Composite WPC Decking nabaphakeli U-Lihua
I-3D embossed Decking
Normal Wall khazi
Embossed Wall khazi
I-Co-Extrusion Wall Cladding
Uchungechunge lwe-WPC Garden
Amaphaneli Wobhentshi WPC WPC
Imbiza Yembali ye-WPC
I-3D Embossed UV Resistance Composite WPC Decking
Ubunikazi bemikhiqizo: I-WPC Decking
Into Cha: 3DLS146H23B
Inkokhelo: TT / LC
Intengo: $ 2.57 / M
Umbala: Teak, Brown, Chocolate, Cedar, Charcoal, njll
Ukuthumela Port: I-Shanghai Port
Isikhathi esiholayo: IZINSUKU EZILI-10-22
2.4m, 2.9m, 3.6m, noma ngezifiso
Ipaki, Indawo ebanzi, Ipaki lamanzi
● Ukuhlobisa i-WPC Izinto eziyinhloko yi-PE, imicu yezinkuni nezithasiselo Ukuhlobisa i-WPC ithandwa emhlabeni wonke njengoba sisebenzisa imvelo.
● I-WPC decking yethu yinhle futhi inhle ngemvelo ngokhuni ukuthungwa kwenhlamvu, thinta ngokufakwa okulula, ngaleyo ndlela ingahlangabezana nezidingo ezahlukahlukene zamakhasimende.Ingagundwa, ibethelwe, iboshwe futhi isikwe ukuze ilingane izesekeli zokucaciswa okuhlukile, njenge-landscape, ingadi engaphandle, ipaki, isuphamakethe, njll.
● I-WPC decking yethu iyasebenziseka kwezemvelo, isetshenziswa kabusha ngokuphelele futhi ayikho enye ikhemikhali eyingozi, ayidingi ukupendwa, akukho glue nokugcinwa kancane.
● I-Decking yethu inekhono elihle lesimo sezulu, ingalungela ukusuka ku -40 kuya ku-60 ℃ .Ukuhlobisa kwethu i-WPC kungasetshenziswa kuwo wonke umhlaba.Ngenxa yokuthi amabhodi ethu amelana nesimo sezulu, anti-slip, imifantu embalwa, i-warp, engenazicathulo .Plus UV okufakiwe kwenza amabhodi ethu UV ukumelana, fade ukumelana futhi durable.Good ubukhulu ukuzinza ngokumelene umswakama kanye lokushisa.
Slip Ukumelana Omile
EN 15534-1: 2014 Isigaba6.4.2 CEN / TS 15676: 2007 EN 15534-4: 2014 Isigaba 4.4
Ukuqondiswa kwebanga elide: Kusho i-72, i-Min 70 Ukuqondiswa okuvundlile: Kusho i-79, i-Min 78
Slip Ukumelana Emanzi
Ukuqondiswa kwebanga elide: Kusho okungu-46, okuncane okungu-44 Ukuqondiswa okuvundlile: Kusho u-55, ongu-53
Ukwehla kokumelana nomthelela omkhulu
EN 15534-1: 2014 Isigaba7.1.2.1 EN 15534-4: 2014 Isigaba 4.5.1
Akukho nokukodwa kokuqagelwa okufanele kwehluleke ngobude bokuqhekeka≥
I-10mm noma ukujula kokufakwa ngaphakathi okuyinsalela≥0.5mm
Ubude beMax.Crack (mm): Ayikho i-crack Max.I-indenation eyisiqalo (mm): 0.31
EN15534-1: 2014 Isijobelelo EN 15534-4: 2014 Isigaba 4.5.2
-F'max: Kusho-3300N, Min≥3000N
-Deflection ngaphansi komthwalo ka-500N Mean≤2.0mm, Max≤2.5mm
Amandla okugoba: 27.4 MPa Modulus ye-elasiticity: 3969 MPa Umthwalo omkhulu: Kusho i-3786N, i-Min 3540N Deflection ku-500N: Kusho: 0.86mm, Max: 0.99mm
EN 15534-1: 2014 Isigaba7.4.1 EN 15534-4: 2014 Isigaba 4.5.3
Isikhathi esisebenzayo siyasebenza: Mean MeanS≤10mm, Max ∆S≤13mm, Mean ∆Sr≤5mm
Isikhala: 330mm, Mean ∆S 1.65mm, Max 1.S 1.72mm, Mean ∆Sr 1.27mm
Ukumunca ukuvuvukala namanzi
EN 15534-1: 2014 Isigaba8.3.1 EN 15534-4: 2014 Isigaba 4.5.5
Ukuvuvukala Okusho: ≤4% ngogqinsi, ≤0.8%
ububanzi, ≤0.4% ubude Ukuvuvukala okukhulu: ≤5% ubukhulu, ≤1.2% ububanzi, ≤0.6% ubude ukumuncwa kwamanzi: Kusho: ≤7%, Max: ≤9%
Ukuvuvukala Okushiwo: 1.81% ubukhulu, 0.22% ububanzi, 0.36% ubude Ukuvuvukala okukhulu: 2.36% ubukhulu, 0.23% ububanzi, 0.44% ubude Ukumuncwa kwamanzi: Kusho: 4.32%, Max: 5.06%
EN 15534-1: 2014 Isigaba8.3.3 EN 15534-4: 2014 Isigaba 4.5.5
Ukumunca amanzi ngesisindo: Mean≤7%, Max≤9%
Ukumunca amanzi ngesisindo: Kusho: 3.06%, uMax: 3.34%
Umugqa wokulingana wokukhulisa oshisayo
EN 15534-1: 2014 Isigaba9.2 EN 15534-4: 2014 Isigaba 4.5.6 ISO 11359-2: 1999
Ukumelana nokufakwa ngaphakathi
EN 15534-1: 2014 Isigaba7.5 EN 15534-4: 2014 Isigaba 4.5.7
Ubulukhuni bukaBrinell: I-MPA engu-79 Isilinganiso sokutakula nokunwebeka: 65%
EN 15534-1: 2014 Isigaba9.3 EN 15534-4: 2014 Isigaba 4.5.7 EN 479: 2018
Izinga Lokushisa Lokuhlola: 100 ℃ Kusho: 0.09%
Langaphambilini Ngaphandle Ngaphandle Kwe-Crack & Warp Wood Plastic WPC Decking
Olandelayo: Ukuhlobisa i-Wood WPC ukuhlobisa ingaphandle
Umhlahlandlela Wokufaka Amabhodi
Ngokufakwa nokunakekelwa okufanele, imikhiqizo yezinkuni iqinisekisiwe ukuthi inikeze iminyaka yobumnandi bokuphila ngaphandle. Ukufeza ukufakwa okungenazinkinga kwemikhiqizo yezinkuni:
-Consult amakhodi wokwakha wendawo ngaphambi kokufakwa.
-Zazi ngemiyalo yokufaka.
-Qiniseka ukuthi unawo wonke amathuluzi nezinto zokwakha ezidingekayo-njengoba kufakwe ohlwini lweshidi lokufundisa.
-Ungaze ulahle izinto zokhuni lapho ulayisha.
-Gcina endaweni eyisicaba bese umboza ngezinto ezingaguquguquki.
-Uma uthwele amapulangwe ezinkuni, qhubeka ukuze uthole ukusekelwa okungcono.
-Bhekisa kwimiyalo yokufaka ukuthola imihlahlandlela eyengeziwe kumkhiqizo ngamunye.
Imihlahlandlela Yokunakekela Nokusingatha Okwehlisa
Ukunciphisa imihuzuko, ama-nick, ukusikeka nemisele, nokugcina ubuhle bokuhlobiswa kwezinkuni. Landela le mihlahlandlela:
-Ungasheleli onezitezi komunye nomunye lapho uzihambisa. Lapho uwasusa kuyunithi, phakamisa amatafula uwabeka phansi.
-Ungaslayidi amathuluzi noma uhudule imishini ngaphesheya kwamadeski ngenkathi kwakhiwa.
-Gcina ingaphezulu lamadokodo ngaphandle kwemfucumfucu yokwakha.Ukulandelela ukungcola nokwakhiwa kwemfucumfucu ebusweni bamaphakethe, okufaka isandla ekuklwebeni komhlaba.
-Uma usebenza ngemikhiqizo yezinkuni noma noma yiziphi izinto zokwakha, qiniseka ukuthi ugqoka izingubo ezifanele nemishini yokuphepha.
-Kuyo yonke imikhiqizo yezinkuni, kungasetshenziswa amathuluzi asebenza ngezinkuni, njengemiyalo yomkhiqizi osebenzayo.
-Scrap singalahlwa ngemfucumfucu yokwakha ejwayelekile.
-wood ine-slip ukumelana okuhle kakhulu emanzi noma eyomile.
-wood inesistimu yokubopha efihliwe eyakhelwe ngaphakathi futhi kulula ukufaka iziqeshana zokhuni.
-Sebenzisa ubuncane obungu- # 8 x 2-1 / 2 ”obushubile, insimbi engagqwali noma isikulufu sedeski elihlanganisiwe.
-I-Drilling pre-iyadingeka esimweni sezulu esibandayo futhi lapho ingaphakathi kuka-1-1 / 2 ”kokuphela kwedeski
-Ungasebenzisi i-glue noma i-caulk ukubophela izingodo zokhuni noma ukuvala ukuhlangana phakathi kwamaphakethe amabili nanoma iyiphi enye indawo.Lokhu kuzovimbela ukwanda kwemvelo nokuncipha kwamapulangwe futhi kuzophazamisa ukugeleza kwedeski.
Ukuphefumula Okufanele Kuyadingeka
- Ukwehlisa ukwakheka komswakama kusuka ngaphansi kwedeski, kufanele kube nokuncane
kwezingu-12 ”isikhala somoya esiphakeme esingavinjelwe esiqhubekayo eceleni kwezinhlangothi ezintathu zephakethe ukuze kuvunyelwe ukungena komoya.
Lokhu kufanele kutholakale ngezansi nje kwaphansi kwe-joist deist.
-Kwezinye izinhlelo zokusebenza ezinomkhawulo, kufaka phakathi amatafula akhelwe ekhoneni elingaphakathi, umoya owengeziwe uzodingeka lapho ideski lihlangana khona nesakhiwo. Ukwehluleka ukuhlinzeka ngephayiphu eyanele kungaholela ekwehlulekeni kwendawo esemgwaqweni futhi kuzokwenza isiqinisekiso singasebenzi.
Lisen Izinkuni decking Ukufakwa Imiyalelo
Ungonga isikhathi nezindleko zokwakha ngokwenza idizayini, uhlele ukubhajetha izinto ezidingekayo ngokuya ngenhloso yohlelo. Ungakhetha impahla yakho siqu ngokuvumelana nezifiso zakho nezinhlobo eziningi zezinkuni ongazikhethela, ukwakhiwa kwezinkuni, imishini yokubaza izinkuni ingasetshenziselwa ukusika, ukusika, ukubhoboza nokunye.
Uma ufaka ukuhlobisa, okokuqala kufanele wenze ukuqina kwangaphambi kokuya phansi emhlabathini, bese ulungisa i-joist emhlabathini onzima. Sincoma iphimbo le-joist ngama-35-40cm. Isikhala seJoist futhi singafinyezwa njengoba kuceliwe.
Cabanga ngesikhala esingu-3cm esakhiweni lapho ufaka i-decking.
Ikhithi elihlangene lokuhlobisa izinkuni iziqeshana zensimbi engagqwali. Ukubhola kufanele kube kuncane kunobubanzi besikulufu esingu-3/4 ukuze kukhushulwe izikhonkwane ezizibambayo zezipikili.
Shwiba kahle ngokufaka isando senjoloba ngesikhathi sokwakha ukuze uqiniseke ngegebe elilinganayo nendawo enhle yokwakha.
Ubude bensimbi buzothinteka ngenxa yendawo enkulu yokwakha. Sincoma isigaba ukuthi kube nesikhala esingu-5mm lapho isigaba esiphambanweni sidingeka.
1.Ungaxhuma i-groove ne-joist ngezikulufu zokuzishaya uma iziqeshana zingatholakali ngokuxhuma kwe-joist nokuhlobisa.
Khetha ibhodi ehambisanayo ukuthi ibe yibhodi elinqenqemeni ngokobungako be-joist nokuhlobisa ngemuva kokuqeda ukwakhiwa.
Amakhiwane Okufaka iziqeshana zepulasitiki
Uma ufaka ukuhlobisa, okokuqala kufanele wenze ukuqina kwangaphambi kokuya phansi emhlabathini, bese ulungisa i-joist emhlabathini onzima. Sincoma iphimbo le-joist le-35-40 cm. Isikhala seJoist futhi singafinyezwa njengoba kuceliwe.
Enye ikiti elihlangene lokuhlobisa izinkuni iziqeshana zensimbi zepulasitiki. Ukubhola kufanele kube kuncane kunobubanzi besikulufu esingu-3/4 ukuze kukhushulwe izikhonkwane ezizibambayo zezipikili.
Ungaxhuma i-groove ne-joist ngezikulufu zokuzishaya uma iziqeshana zingatholakali ekuxhumekeni kwe-joist nokuhlobisa.
Faka i-decking eqinile
Uma ufaka ukuhlobisa, okokuqala kufanele wenze ukuqina kwangaphambi kokuya phansi emhlabathini, bese ulungisa i-joist emhlabathini onzima. Sincoma iphimbo le-joist le-35-40cm. Isikhala seJoist futhi singafinyezwa njengoba kuceliwe.
Cabanga ngezikhala ezi-3cm esakhiweni lapho ufaka i-decking eqinile Faka i-decking eqinile ngezipikili ezibonakalayo bese ubeka uzipho 2cm onqenqemeni.
Q: Lithini izinga labahlinzeki benkampani yakho?
A: Zonke kufanele zifane nokuma kwesidingo sefektri yethu, njenge-ISO, ukusebenziseka kwemvelo, ikhwalithi ephezulu, njll.
Q: isikhathi esingakanani usebenza isikhunta sakho ngokujwayelekile? Ungayigcina kanjani nsuku zonke? Yini amandla esethi ngayinye yokufa?
A: Ngokuvamile isikhunta esisodwa singasebenza izinsuku ezingama-2-3, sizokugcina ngemuva kwe-oda ngalinye, amandla esethi ngayinye ahlukile, ngoba amabhodi ajwayelekile ngolunye usuku kungu-2.5-3.5ton, imikhiqizo ye-3D embossed ingu-2-2.5tons, co- imikhiqizo ye-extrusion ingu-1.8-2.2tons.
Q: Iyini inqubo yakho yokukhiqiza?
A: 1.Qiniseka ukuthi ubuningi nombala we-oda nekhasimende
Ingcweti yokulungisa ifomula bese wenza isampula yokuqinisekisa umbala nangemva kokwelashwa nekhasimende
Ngemuva kwalokho yenza i-granulation (Lungisa okokusebenza), khona-ke kuzoqala ukwenziwa, imikhiqizo ye-extrusion izofakwa endaweni ethile, ngokuhamba kwesikhathi sizokwenza ngemuva kokwelashwa, bese sikupakisha lokhu.
Q: Isikhathi esingakanani isikhathi sokulethwa esijwayelekile semikhiqizo yakho?
A: Kuzohluka ngokuya ngobuningi.Ngokujwayelekile kumayelana nezinsuku eziyi-7-15 zesitsha esisodwa se-20ft.Uma imikhiqizo ye-3D embossed kanye ne-co-extrusion, sidinga izinsuku ezi-2-4 ngokujwayelekile njengenqubo eyinkimbinkimbi.
Q: Ingabe unayo ubuncane be-oda ubuncane? Uma kunjalo, lithini inani elincane le-oda?
IMP: Ngokuvamile sinenani eliphansi, liyi-200-300 SQM.Kodwa uma ufuna ukugcwalisa isitsha esilinganisweni somkhawulo, eminye imikhiqizo embalwa esizokwenzela yona!
Q: Uyini umkhiqizo wakho womkhiqizo? Kwazuzwa kanjani?
IMP: Isivuno somkhiqizo wethu singaphezu kwama-98%, ngoba sizolawula ikhwalithi ekuqaleni, kusukela ekuqaleni kwento, i-QC izolawula ikhwalithi lapho kwenziwa, futhi ingcweti izobheka futhi ivuselele ifomula njalo.
Q: isikhathi eside kangakanani isikhathi sokusebenza kwemikhiqizo ye-WPC?
A: Cishe kube yiminyaka engama-25-30 ngaphansi kwezimo ezinhle.
Q: Yiliphi igama lokukhokha ozolamukela?
A: Isikhathi sokukhokha ngu-T / T, Western Union njalonjalo.
Q: Ukuqhathanisa nezinkuni, yini inzuzo ngemikhiqizo ye-WPC?
A: 1, imikhiqizo ye-WPC inemvelo ngokuphelele, ingu-100% kabusha.
Okwesibili, imikhiqizo ye-WPC ayinamanzi, ayinabufakazi bomswakama, ayina-moth ne-anti-mildew.
Okwesithathu, imikhiqizo ye-WPC inamandla amakhulu, ukuwohloka okuphansi nokudabuka, akuyona ukuvuvukala, akukho ukusonteka futhi akuphukile
Q: Ingabe imikhiqizo ye-WPC idinga ukupendwa? Yimuphi umbala ongamnika wona?
A: Njengokwehluka ngokhuni, imikhiqizo ye-WPC uqobo ingumbala wayo, badinga ukudweba okwengeziwe. Ngokuvamile, sinikeza imibala eyisi-8 eyinhloko njengoCedar, ophuzi, uphayini obomvu, ukhuni olubomvu, onsundu, ikhofi, okumpunga okukhanyayo, okumpunga okwesibhakabhaka. Futhi, singenza umbala okhethekile ngokwesicelo sakho ngasinye.
I-3D WPC Decking
Ukwakhiwa kwe-WPC eyinhlanganisela
Deck Super Embossed
Ukumelana ne-UV WPC decking
3D Embossing Ngini Imvelo WPC elingenalutho WPC ...
Embossed Manzi Izinkuni Plastic WPC Holl ...
3D Izinkuni Deep Grain Embossed Izinkuni Composite Soli ...
3D Embossing Isimo Sezulu Ukumelana esiyinhlanganisela Hollo ...
Outdoor Deep Embossed UV Resistant WP esiyinhlanganisela ...
Outdoor Anti-ukushelela Deep Grain Embossed Composite ...
Cha. 46 yomgwaqo webaishijian,
indawo yezimboni zeLangxi,
I-imeyili: alice@lisenwpc.com Ucingo: 0086-0563-3830116 Iselula: 0086-13635632626
Ungazitholela i-WhatsApp ne-Wechat
© Copyright - 2021-2025: Wonke Amalungelo Agodliwe.
ngokhuni plastic decking esiyinhlanganisela, WPC decking esiyinhlanganisela, WPC decking ongaphandle, Ukuhlobisa i-WPC yangaphandle, WPC phansi, WPC decking phansi,